Soo dejisan Total Commander 9.51 – Windows – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaTotal Commander
Bogga rasmiga ah: Total Commander
Total Taliyaha – tababare file awood badan oo xasiloon. Total Taliyaha ayaa tiro balaadhan oo ah hab loo baahan yahay si wanaagsan u maamulo files of noocyo kala duwan. software The taageertaa badan oo hawlaha aasaasiga ah sida magaca, sort by size ama alifbeetada, nuqul, tirtirto, iwm Total Taliyaha ka kooban module ah in la archives of ZIP ama nooca rar shaqeeyaan. software The u saamaxaaya in ay soo bixi ama geliyaan faylasha ee threads badan. Total Taliyaha ayaa sidoo kale waa inay awoodaan si ay u qabtaan howlaha user-qeexay ah iyadoo la isticmaalayo keyboard ah.
set Great qalabka si ay ula shaqeeyaan files
Dhisay-in file Daawade
Soo dejisan Total Commander
Faallo ku saabsan Total Commander
Total Commander Xirfadaha la xiriira